SEO - Achọrọ m enyemaka maka ụtụtụ a n'ụfọdụ koodu m na-ede. M pịrị aka na nsonaazụ izizi na peeji nsonaazụ njin nchọta ahụghị ihe m na-achọ. Emegharịrị m nyocha ahụ n'ụzọ ole na ole ma mesịa chọta ezigbo ozi m chọrọ. Nke ahụ ọ pụtara na oge m na-etinye uche m dị mkpụmkpụ n'ihi na m etinye obere oge na nyocha ọ bụla? Mba, ọ pụtara na ha abaghị uru ma m gara n’ihu na-achọ ihe ọmụma achọrọ m ruo mgbe m chọtara ya. Achọpụtara m na ọ dịtụghị, ihe ọ bụla gbadara site na ọrụ dị n'aka hand mana nhọrọ ndị ahụ mere.
Ose na Vidiyo - Enwere m mmasị ige pọdkastị na ikiri vidiyo, mana enweghị m ndidi maka ịsụ ọbara ma ọ bụ ịkwalite ndị na-ekwu okwu onwe ha. M ga-ege nti ma obu na ekiri vidiyo mgbe niile… rue mgbe m rutere nsonaazụ ebe ogo na mmeputa na-enye m ihe m choro. Na mgbe ahụ enwere m ike ịge ntị ruo ọtụtụ awa ma ọ bụrụ na isiokwu a bụ ihe ọmụma ma na-atọ ụtọ. Anyị na-ebi n'ime ụwa nke ị na-ekiri ihe nkiri na-achọ video… folks, ọ nweghị nlebara anya na nsogbu na ngwụcha izu nke ocheeze!